Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1389
Ho fampitomboana ny hetra : mila ambara ny marina amin’ny vola miditra
Par Taratra sur 16/01/2016 Divers, NS Malagasy
Nanao atrikasa ny mpiasan’ny hetra, omaly teny Anosy Avaratra. Tompon’andraikitra samihafa manerana ny Nosy, miisa 400 nandray anjara niara-nidinika sy nifanakalo traikefa hanatsarana ny fidiran-ketra. Nitarika ny fotoana ny minisitra Rakotoarimanana Gervais sy ny talen’ny jeneralin’ny hetra, Rajoelison Liva. “Mila hampitomboana ny hetra miditra raha zahana ny hôpitaly, fampianarana, lalana, fotodrafitrasa isan-karazany”, hoy ny minisitra […]
Fampiharana ny tena vidiny : nihena -150 Ar ny litatry ny lasantsy
Manaraka ny fiovaovan’ny vidin-tsolika eran-tany koa ny eto amintsika. Na izany aza, tsy fantatra raha tena mifanandrify amin’ny tena vidiny eo amin’ny tsena iraisam-pirenena tokoa, sady tsy ahazoana fanazavana rahateo izany. Nidina! Nihena ho 3.550 Ar ny litatry ny solika SP 95, nanomboka , omaly, raha 3.700 Ar teo aloha. Izany hoe, nisy fihenany -150 […]
IFRC : mendrika ny fandaharanasan’ny tanora ao amin’ny CRM
Par Taratra sur 16/01/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nahazo ny loka avy amin’ny federasiona iraisam-pirenen’ny Croix Rouge sy ny Croissant Rouge ny fandaharanasan’ny tanora ao amin’ny Croix-Rouge Malagasy izay tarihin-dramatoa, Razafimanantsoa Amintsoa. Niompana tamin’ny famelabelarana ny tetikasa mikasika ny ady amin’ny fanilikilihana sy fandrahonana mianjady amin’ny mpianatra any an-tsekoly ny lohahevitra nahazoan’ny fandaharanasan’ny tanora ao amin’ny CRM loka. Ampiharina manomboka amin’ity taona ity […]
Betioky Atsimo : telo andro tsy nisy jiro sy rano
Efa tao anatin’ny telo andro tanteraka izao, miaina amin’ny tsy fisian’ny jiro sy rano ny tanànan’i Betioky Atsimo. Simba ireo milina telo mampandeha ny jiro sy ny rano. Milina manome herinaratra sy manosika ny rano ho avy any an-tokantranon’ny tsirairay. Araka izany, mifampiankina tanteraka ny jiro sy ny rano ao amin’ny distrikan’i Betioky Atsimo. Hisy […]
Nanomboka nanao ny fanisana ireo olona tsy manan-kialofana sy mpatory an-tsena na 4’mi teto an-dRenivohitra ny minisiteran’ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy tamin’ity herinandro ity. Voaksik’izany ireo 4’mi mirenireny eny Ambohijatovo, Ambohidahy Ambatomena, Antaninarenina, Analakely, Soarano ary Tsaralalàna. Nitohy teny Behoririka, Andravoahangy, Ambodivona ary Antanimena ny fanisana azy ireo. Hatramin’izao, […]
Nampahafantarin’ny masoivohon’i Etazonia sy ny English Teaching Program (ETP) ny disokafan’ny fisoratana anarana amin’ny vatsim-pianarana “English Access Microscholarship Program” amin’ity taona ity. Mitaky ny fandraisana anjaran’ ny tanora manan-talenta 13 ka hatramin’ny 20 taona avy amin’ny lycée tantanin’ny fanjakana ary avy amin’ny fianakaviana sahirana eto Madagasikara ny fandaharanasa. Ity fandaharanasa maharitra roa-taona ity izay vatsian’ny […]
CEPE sy BEPC 2016 : tsy hihatra ny famerana taona
Tsy mbola hihatra amin’ity taom-panadinana ity ny famerana ny taonan’ny zaza hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE. Maro amin’izy ireny no efa misoratra anarana sy mianatra amin’ny kilasy 7ème ka sarotra indray ny hanakana ny mpianatra tsy handray anjara amin’ny fanadinam-panjakana. Fotoana tetezamita ny taom-pianarana 2015-2016 ka miroso amin’ny fepetra amin’ny taom-pianarana manaraka ho avy. Na izany […]
Ahina ny fiakaran’ny rano any amin’ny Faritra Boeny sy Sofia vokatry ny rotsakorana be andrasana anio sy rahampitso. Eto Antananarivo, na ambara aza fa tsy misy ny loza, efa miaina anaty petsapetsa sy rano ny vahoka. Nandefa filazana miloko mena midika ho loza mitatao momba ny habetsahan’ny rotsakorana ho an’ny faritra Boeny sy Sofia ny […]
Par Taratra sur 16/01/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Ifanjevoana tanteraka. Nitondra ny fahitany ny fitantanana ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny mpanolotsain’ny tanàna, ivelan’ny Tim manoloana ireo fanapahan-kevitray ny mpanatanteraka eo anivon’ny fiadidina ny Tanàna. « Nivoaka ny efitrano fivoriana izahay ary tsy nandany ny tetibola. Tsy hita taratra amin’io tetibola io ny fandaharanasa. Niakatra avo telo heny koa ny hofan’ny tsena : Analakely, Andravoahangy, […]
Mijoro efa ho taona vitsivitsy ao anivon’ny foibem-paritry ny fampianarana sy ny fampiofanana ara-teknika sy araka asa ao Vakinankaratra ny fikambanana iray ivondronan’ireo sekoly misahana ny fampianarana sy ny fampiofanana ara-teknika enina misy. Eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Fampianarana sy fampiofanana ara-teknika sy arakasa ny fikambanana io ary antsoina hoe Groupement régional de l’enseignement technique et de […]
Taona 2016 : atao ampahibemaso ny fandraisana mpampianatra
Atao ampahibemaso ny fandraisana ny mpampianatra Fram ho mpiasam-panjakana amin’ny andiany fahatelo amin’ity taona ity, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Hatramin’izay, ny sekoly no mandahatra ny mpampianatra araka ny taona nanabeazany tao amin’ny sekoly, ampiakarina ao amin’ny Zap sy ny Dren ny lisitra avy eo. Ankehitriny, hampanantsoana mihitsy hanatrika eo ireo mpampianatra Fram […]
Nizarana finday ireo mpanolotsaina : nitsefotra ny fanonganana an-dRatsiraka Elysé
Maty momoka ny fikasan’ireo mpanolotsaina hitsipahana ny ben’ny Tanànan’i Toamasina, Ratsiraka Elysé tokony ho natao, omaly ao amin’ny efitrano fivorian’ny filankevitra. Nialoha izany, efa mazava ny resaka fa havela hanohy ny asany aloha ireo mpikambana maharitra anatin’ny filankevitry ny Tanàna, tarihin’ny filohany, Razafimanana Jean Christin (Mapar) sy ny filoha lefitra Andriamiarifera Malalaniaina (Tim). Ho […]
Par Taratra sur 16/01/2016 En Bref, NS Malagasy
Efa eto an-tanindrazana, hatry ny afakomaly, ny filohan’ny Tetezamita, Rajoelina Andry. Voalaza fa mandalo fotsiny ihany ny tenany amin’izao diany eto izao ary tsy haharitra ela izany. Etsy andaniny, nisafidy ny tsy haneho hevitra manoloana izao raharaham-pirenena izao ity mpanorina ny TGV sy ny Mapar ity. Anisan’izany ny fifidianana loholona farany teo sy ny resaka […]
Fikarohana ireo jiolahy mpaka an-keriny : betsaka ny zava-miafina ao aminy
Raharaha iray anisan’ny nitana ny sain’ny maro manerana ny Nosy mihitsy ity raharaha fakana an-keriny zanaka mpandraharaha ara-toekarena, sady tompona haino aman-jery tsy miankina iray any Toamasina ity. Tsy mbola nisy ny fanazavana momba ilay fiara 404 bachée 5063 TAA, nampiasain’ ireo jiolahy nisakanana ny fiara nitondra azy mianandahy ny marain’ny 23 novambra, tokony ho […]
Randrianantenaina Modeste : ”Hafainganina ny raharaham-pitsarana”
“Fitsarana tan-dalàna no andrasan’ny vahoaka, ary fitsarana tsy mitarazoka fa mba ho haingana araka izay azo atao”, hoy ny filohan’ny fitsarana tampony, Randrianantenaina Modeste, tamin’ny mpanao gazety taorian’ny lanonam-pitsarana fanombohana ny taom-pitsarana, taona 2016, teny amin’ny fitsarana an-tampony, Anosy, omaly. Samy mba miezaka maka ny andraikitra araka ny azo atao ny tsirairay amin’ny fanafainganana ny […]
Distrikan’Ambohidratrimo : nitambatra ireo ben’ny Tanàna 24
Par Taratra sur 16/01/2016 NS Malagasy
”Dimy ambin’ny folo taona izao izahay no nanaitra ny fitondram-panjakana momba ny fanampiana ny kaominina. Zara anefa raha misy izany. Handoavana ny karaman’ny mpiasa koa anefa raha mba misy aza. Tsy misy tokotaniny ny tetibola hampandrosoana ny tanàna… », hoy ny ben’ny Tanànan’Ambohidratrimo sady filohan’ny fikambanan’ny ben’ny Tanàna eo anivon’ity distrika ity, Rajaonasolo Clovis, omaly teny […]
Ambalavelona any Miandrivazo : hotsaraina amin’ny alakamisy izao i Kohen Rivolala
Velona ahiahy tanteraka ny ray aman-drenin’ireo mpianatra tratran’ny aretina ambalavelona tany Miandrivazo manoloana ny “Raharaha Kohen Rivolala”. Fantatra, araka ny loharanom-baovao iray marim-pototra fa tsy hita tao amin’ny biraon’ny polisy ao Miandrivazo intsony ny fiaran’i Kohen, nanomboka ny alakamisy antoandro teo fa hoe niakatra aty an-drenivohitra. Io fiara io anefa voalza fa tsy misy taratasy […]
Jirama Fianarantsoa : ahina ho niniana nodorana
Manahy ny tompon’andraikitry ny Jirama any Fianarantsoa fa “mety ho haitrano niniana natao (incendie criminelle), no niteraka ny fahamaizana indroa miantoana tamin’ireo birao vitsivitsy tany tao amin’ny foiben’ny Jirama any an-toerana, omaly vao maraina be. Tapitra may kila ny entana samihafa tamin’ireo birao ireo, araka ny fantatra. Araka ny loharanom-baovao, voaray tany an-toerana, nahenoana fipoahana […]
Jery taratra… herinandro : tsy milamina, tsy mitony…
Mby aiza ny raharaham-pirenena amin’izao taona vaovao izao? Adihevitra politika ny amin’ny tokony hanovana na hanamboarana na tsia ny governemanta. Miankina amin’ny filohan’ny Repoblika ny hampilamina izay. Tsy maintsy miara-mampandroso ny firenentsika isika. Manaraka ho azy ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Rehefa hitany fa mandroso isika, raha ny nambaran’ny filohan’ny Repoblika tany Mahavelona, Toamasina. Anjaran’ny Malagasy […]
Minisitry ny Fitsarana : “Tsy fantatra raha misy mpitsara na tsia ny “Raharaha Arnaud”
“Misy ny feo naely fa hoe misy mpitsara voarohirohy ao anatiny. Hatramin’izao, raha ny loharanom-baovao voaangona: tsy mbola afa-kiteny ny tenanay hoe marina izany na tsia.” Io no fanazavan’ny minisitry ny Fitsarana, Ramanantenasoa Noëline, teny Anosy, omaly, momba ny raharaha fakana an-keriny an’i Arnaud tany Toamasina. Filazana izay misy fahasamihafany ihany amin’izay voalazan’ny sendikan’ny mpitsara. […]
Par Taratra sur 16/01/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Ahoana ihany izy ity? Na ny fiainam-pirenena io, na fiainam-bahoaka. Tsy hita be ihany! Ny tompony, mangataka atiny. Tsy iza fa ny vahoaka: “Ny mpitondra no mitondra, ny vahoaka”, hoy i Ombalahibemaso izay. Avy amin’ny vahoaka ny fahefana izay ampindraminy ny mpitondra. Na efa namidin’ny tompony aza ny omby na ondry, mendrika homena azy ny […]
Raikitra ny ampamoaka : «Manao asan-jiolahy koa ny mpitandro filaminana», hoy ny mpiandry fonja
Par Taratra sur 16/01/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Samy miaro ny rambony tsy ho tapaka. Nahitsy ny fanehoan-kevitry ny Sendikàn’ny mpandraharaha ny fonja (SPAPM) fa tsy afa-bela amin’ireo asan-jiolahy miseho lany etsy sy eroa koa ny mpitandro filaminana (polisy, zandary, miaramila). Na izany aza, niaiky izy ireo fa misy ihany ireo mihoa-pefy ny sasany amin’ireo mpiandry fonja. « Raisinay ho fanalam-baraka ny filazana fa […]
Par Taratra sur 15/01/2016 NS Français, Opinion
Alors que le régime entame la seconde partie de son mandat, l’analyste politique et ancien ministre Gilbert Raharizatovo se projette dans l’avenir. Interview. *Les Nouvelles : 2015 a été une année très difficile. Observerait-on encore la même tendance cette année ou existerait-il un redressement plus positif de la courbe ? – Raharizatovo : L’Etat est […]
Tsy mahavita ny asany ny Samva : hiverina hanadio tanàna ny fanjakana
Par Taratra sur 15/01/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Hiverina hanadio tanàna indray ny fanjakana, araka ny tapaka tao anatin’ny filankevitry ny minisitra ny alarobia teo, satria tsy vitan’ny Samva ny nitazona ny fahadiovana tao anatin’ny andro maromaro. Hitohy mandritra ny dimy andro ny asa. «Ny vola fanampiana efa nomen’ny fanjakana 156 tapitrisa Ar ihany no ampiasaina hanaovana ny asa», hoy ny minisitry ny […]
Par Taratra sur 15/01/2016 Economie, NS Malagasy
Tapa-kevitra ny hanavotra ny vokatra lavanila ny any Maroantsetra, faritra Analanjirofo. Nivory tany Maroantsetra, omaly niaraka tamin’ny mpamokatra any an-toerana, ny Vondrona nasionaly mpamokatra lavanila (PNV) tarihin’ny filohany, Zakaria Nesthor, namariparitra ny amin’ny hamerenana, araka ny tokony ho izy, ny kalitaon’ny lavanila. Fantatra fa noho ny halatra lavanila mbola tsy matoy no manimba ny kalitaon’io […]
« Précédent 1 … 1 387 1 388 1 389 1 390 1 391 … 1 401 Suivant »
Faux billets: deux suspects arrêtés à Manakara 14/07/2020
Braquage à Mahajanga Be : le vigile est de mèche avec les malfrats 14/07/2020